5th December 2018, 07:03 pm | १९ मंसिर २०७५
दिउँसोको १/२ बजेको समयमा बाटोमा कोही नहिँड्ने बेला मौका पारेर केटीहरुलाई 'आऊ आऊ…' भनेर बोलाउँथे। उसको शरीरको तल्लो भागमा लुगा नै हुन्थेन।
निर्मलाको शव भेटिएको दिन स्थानीय पत्रकार पुष्कर भट्टले खिचेको दृश्यका आधारमा साउन ११ गते प्रसारण भएको माउन्टेन टेलिभिजनको 'मिसन न्युज' कार्यक्रम यही प्रकरणमा केन्द्रित थियो।
काठमाडौँका एक अनुसन्धानकर्मीले पनि त्यो कार्यक्रम हेरेका थिए। ३० मिनेटको त्यो कार्यक्रममा एक स्थानीय युवतीको ३० सेकेन्डको 'बाइट'ले एउटा 'क्लु' दियो। (माथिको भिडियोमा ३० सेकेन्डमध्ये १७ सेकेन्डको बाइट हेर्न सक्नुहुन्छ)। उनले त्यो जानकारी महेन्द्रनगर फिल्डमा खटिएकाहरुलाई दिए।
'कुहिरोको काग' को अवस्थामा रहेको प्रहरीलाई यो 'क्लु' महत्त्वपूर्ण थियो। किनभने पोस्टमार्टम रिपोर्ट र अन्य परिस्थितिका आधारमा निर्मलाको हत्या दिउँसो २ बजेदेखि ४ बजेको बीचमा हुनुपर्ने निचोड प्रहरीले निकालेको थियो।
युवतीले टेलिभिजनमा भनेको समय पनि बम दिदीबहिनीको घरबाट निर्मला निस्किएको भनिएको समयसँग मिल्छ। शव भेटिएको ठाउँ पनि नजिकै। कतै यही ठाउँमा केटीहरुलाई गुप्ताङ देखाएर 'आऊ आऊ…' भन्ने केटाले त बलात्कार गरेका हैनन्? यही शंकामा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्ने निधो गर्छ।
टेलिभिजनमा उनको नाम देखाइएको हुँदैन, नेमप्लेटमा 'स्थानीय, कञ्चनपुर' मात्र लेखिएको हुन्छ।
त्यही अपलोड भएको भिडियोबाट स्क्रिनसट प्रिन्ट गर्दै प्रहरीले 'यो केटी चिनेको हो?' भन्दै सोध्दै हिँड्छ।
अन्ततः युवतीको पहिचान हुन्छ - बबिता चन्द।
'हामी यो बाटो सधैँ हिँड्थ्यौँ। यो बाटो हिँड्दा डर हुन्थ्यो,' बबिताले प्रहरीलाई भनिन्, 'तीन चार पटक म आफै परेकी छु। हामीलाई … देखाउँथे। आऊ आऊ भन्थे। समाउन खोज्थे।'
'त्यस्तो मान्छे चिन्नुहुन्छ त? अनुहार कस्तो थियो?'
'अहँ, कहाँ चिन्नु। हाम्रो त सातोपुत्लो उड्थ्यो। हामी त मुखै हेर्न सक्दैन थियौँ। डराएर छिटोछिटो भागिहाल्थ्यौँ।'
'मैलेमात्र हैन, अरुहरुले पनि भोगेका छन् सर यस्तो। गएर सोध्नुस् न।'
प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर लामो केरकार गरेपछि उसले देखाउने गरेको स्वीकार्छ, 'एक्लै बाटोमा हिँडिरहेकी केटी देखेँ भने पाइन्ट खोलेर देखाइदिन्थेँ। तुरी देखेर लोभिएर आउँछन् कि भनेर हो।'
सुदूर पश्चिमको समाज त्यति धेरै खुला छैन। यस्ता घटना धेरैजसो 'गुपचुप'मै सुल्टिन्छन्। निर्मलाको प्रकरण फैलिएर अहिलेको जस्तो रुप नलिएको भए बाटोमा हिँड्ने युवती देख्नसाथ यौनको उद्देश्यले बोलाउने वा तर्साउने र गाँजा खान बस्ने भन्ने घटना पनि सायदै सार्वजनिक हुने थियो। यो घटनामा अनुसन्धान गरिरहँदा प्रहरीले चाल पायो – यो सुनसान ठाउँको नामाकरण नै अपराधसँग जोडिने गरी भइसकेको रहेछ।
निर्मलाको साइकल भेटिएको ठाउँमा युवा जम्मा भएर लागू औषध प्रयोग गर्ने भएकाले यस चोकको नामै ‘दुर्व्यसनी’ चोक राखिएको रहेछ। यस्ता दुर्व्यसनीहरुले यो चोकलाई भने 'डेटिङ स्पट' भन्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ।
स्थलगत रिपोर्टिङका लागि त्यहाँ पुग्दा स्थानीयबासीले पनि हामीलाई त्यो ठाउँमा गाँजा खाने मानिसहरु हुने गरेको बताएका थिए। जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी कुबेरबहादुर कठायत भन्छन्, 'केही महिलाले शङ्कास्पद व्यक्तिहरू बस्ने गरेको बताएकाले हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ।'
शृङ्खला १० :निर्मलाको शव भेटिएकै ठाउँतिर एक्टिभेट मोबाइलको म्यासेज: 'त्यो केटी छाड्देऊ, त्यो भन्दा राम्री मिलाइदिन्छु।'